Fitsidihan’ny Mpanjaka Telo An’i New York · Global Voices teny Malagasy
Fitsidihan'ny Mpanjaka Telo An'i New York	Voadika ny 11 Janoary 2013 2:59 GMT
Zarao: Tonga ireo mpanjaka telo ary lasa, saingy tsy maintsy nandalo ny tanànan'i New York hiara-hankalaza amin'ny kilonga an-jatony izay tonga hijery ny matso izay nokarakarain'ny an'i Museo del Barrio tamin'ny 4 Janoary, Zoma nibaliaka masoandro tsy mahazatra ho an'ny volana. Anisan'ny kolontsaina nentin-drazana hatramin'ny taonjato maro ity fomba fankalazana krismasy, izay sarotsarotra azo (tahaka ny kristianisma ihany), ny fototra ara-tantarany sy ara-pivavahany ity.
Any Porto Rico, ohatra, ny takarivan'ny fitsidihan'ny Mpanjaka (Magy) Telo, mamela mololo ao amin'ny fitoera-kiraro ny ankizy ho an'ny soavalin'i Melchor, Gaspar ary Baltasar, ho fisaorana azy ireo amin'ny fanomezana izay ho azon'izy ieo ny andro manaraka. Ny marina, niova araka ny fomban'ny famoronana nandritra ny taona maro io fomba io. Tahaka izany ny fahatongavan'ny mpanjaka mitaingi-tsoavaly, fa tsy mitaingin-drameva, , ary ankalazaina miaraka amin'ny voady [es] voasokitry ny santeros (mpanao asa-tanan'ny sary masina) izay loharanom-pifaliana sy aingam-panahy.
Tsy isalasalana fa ny fiaraha-monina Porto Rikana sy Amerikana Latina izay velona sy mihetsiketsika eto amin'ny tanàna goavana antsoina hoe New York dia tsy nitsahatra ny nankalaza ity andro ity tao anaty fientanentanana, indrindra fa ny kilonga. Maro tokoa hany ka nikatso ny lalan'ny East Harlem hijery ny fandalovan'ny voatiry, magy ambony lasely, dihy peroviana, capoeira, marionety goavana, eny hatramin'ny rameva or izay monina ao amin'ny valan-javaboary ao New Jersey.
Indreto ary ny andian-tsary nopihan'ilay artista Porto Rikana Josué Guarionex izay ahitana ny endrika sasantsasany amin'ireo mpandray anjara rehetra.
Jesús “Papoleto” Melendez, poeta teraka ny nihalehibe tany East Harlem, nofantenina ho mpanjaka mivezivezy nandritra ny matso.
Mpandihy manatontosa ny mozika nantin-drazana Peroviana.
Osvaldo Gómez nahamirana anay tamin'izao fanatrehany izao.
Saiky tsapantsika ny angovon'ity tarika amin'ny sary ity.
Zazalahy sy zazavavy an-jatony avy amin'ny Lalana sy Kianjan'ny Avenue 106th ka hatramin'ny 116th.
Ilay mpanangom-baovao miavaka, María Hinojosa, sy ilay mpikatroka, Angie Rivera, voafantina ho anisan'ny mpanjakavavin'ny lanonana ihany koa.
Fátima Shama, miasa ao amin'ny Raharahan'ny Mpifindra-monina ao amin'ny Fiadidian'i New York, izay notsongaina ho anisan'ny mpanjakavavy ihany koa.
Tanya Torres, artista PortoRikana monina ao East Harlem, dia iray amin'ireo renin'andriamanitra tamin'ny matso, Nadema Agard, Cecilia Gastón, Christine Licata ary Sandra Morales-De León.
Fanomezana lehibe ny fitsangatsanganana manerana ny arabe ao New York niaraka tamin'ireo ankizy be dia be.
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Aymara, Swahili, Nederlands, Български, polski, Español
Fifindrà-moninaMediam-bahoakaSaripikaZavakanto & Kolontsaina